Shina SGS manamarina vy vy prefab orinasa mpanamboatra sy mpamatsy | Vondrona mahazatra
Mitady ny firafitra vy any Chine?
Afaka manolotra izay tena ilainao izahay. Ny firafitra dia namboarina manokana ary namboarina hifanaraka amin'ny tetikasa manokana.
Miaraka amin'ny fananana traikefa marobe amin'ny famolavolana vy vita amin'ny vy, lamba ary serivisy, afaka mitari-dalana anao izahay amin'ny fanapahan-kevitrao ary hamolavola vahaolana tonga lafatra ho anao.
Rafitra lehibe Varahina vy vita amin'ny vy
Purlin C Fantsona Channel na Z Section Channel
Famonon-taolana Sandwich panel na baoty vita amin'ny vy vita amin'ny baiko vita amin'ny fibre vera
Fametahana rindrina Sandwich Panel na baoty vita amin'ny corrugated
Tie Rod Tube Boribory
Hatanjaho hiatrika Boribory boribory
Tsanganana & Fihenjehana mafy Angle vy na H Fizarana vy na Hantsona vy
Knace Brace Angle Steel
Roof Gutter Tarika Baovao Loko
Rainspout PVC Pipa
Door Sliding Sandwich Panel Door na Door Metal
Windows PVC / plastika vy / varavarankely vita amin'ny alumina
mampifandray High Bolts tanjaka
fonosana Ianao no nanapa-kevitra anao, nampidirina tao amin'ny 1X 40ft GP, 1X20 ft GP, 1X40 ft HQ
mpitan- Azontsika atao ny manao ny famolavolana sy ny teny nindramina arakaraka ny fangatahana na ny tranoben'ny rafitry ny rafitr'andriamanitrao
9. Ny anjakan'ny zoro: vy vy
Atrikasa haingo vita amin'ny maivana
Ny atrikasa vy vita amin'ny hazavana maivana dia azo aorina sy arakaraka ny habeny sy ny endriny mifanaraka amin'ny filanao manokana. Ireto misy safidy vitsivitsy ho an'ny famolavolana ny atrikasa vy vita amin'ny maivana.
Ny tsangambato vy sy ny vakana dia ny firafitry ny tranobe fananganana vy, izay hanangana ny andry Q345B H. Mampiasa ny andry Q345B H koa ny sefo crane overhead. Ny sary hosodoko ho telo sosona.
Azo alaina amin'ny karazana C, Z, U ny karazana purlin sy tafo. Ny vy vy mipetaka dia apetaka amin'ny rafi-pandrefesana fantsom-baravarana. Ho an'ny tsangam-baravarana sy ny rafitra bracing, ny vy vita amin'ny rojo sosona roa dia hampiasaina. Ny lokon'ny rindrina sy ny tafo dia namboarina arakaraka ny zavatra takinao. Ny takelaka dia misy karazana roa. Ny iray dia tsipika tokana na vy vy, ary ny iray hafa dia mi-panel, toy ny polyphenylene, volon'ondry ary polyurethane. Ny foza dia apetraka eo anelanelan'ny takelaka roa, mampahafana azy amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra. Misy ihany koa ny fiatraikan'ny insulation feo.
Previous: Tetikasa fitehirizana mangatsiaka any Aostralia
Manaraka: Ny orinasam-panorenana vy dia manamboatra mialoha ny fananganana rafitra vy